जनताको मतको कदर गरियोस् – एमसीसी पास नगरियोस् ! « Media for all across the globe
एमसीसीको समर्थक पनि होइन। बिरोधी पनि होइन। तर, यस्तो विवादित विषयलाई सरकार किन जोडबल गरिरहेको छ – मेरो प्रश्न? आम नागरिकमा अहिले एमसीसी बारेमा प्रश्न जाग्नु स्वभाबिक हो।
जनताका हरेक प्रश्नको सामना सरकारले गर्नैपर्छ। विरोधीलाई दमनको नीति अपनाउनु भनेको लोकतन्त्रको अपमान पनि हो। एमसीसीको सर्मथनमा बोल्ने नेताहरुलाई सोध्नु चाहान्छु? तपाई राजनीति गर्न लागेको कति भयो? तपाइको गाउँका मान्छेलाई कसरी चिन्नु हुन्छ? छातिमा हात राखेर भन्नुहोस् – नेताज्यू?
मेरो चुनावी क्षेत्रका मतदाताहरुलाई राम्ररी चिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ? जनताले तपाईंलाई रोस्टममा किन पठाए? जनताले सांसद के बनाए? सांसद बनेपछि देशको ठेकेदार आफैलाई सोच्नु मुर्खता हो। जनताको भाग्य बिधाताको ठेकेदार आफुलाई सोच्न बन्द गर्नुहोस्? यसो भनिरहदा एमसीसी पासै नगर भनेको पनि होइन। एमसीसीको विषय कुनै पनि पार्टीले चुनावको बेलामा आफ्नो एजेन्डा बनाएका थिएनन्? यस्ता विवादित विषय पहिला आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गर? चुनावमा उल्लेखै नभएका विषय किन आउदैँछन्। यस्ता कुराहरु कसको स्वार्थका लागी आइरहेका छन् – आम नागरिकको मुख्य प्रश्न हो।
एमसीसी जनताका लागि नौलो भएको हुदाँ सदनबाट अनुमोदन नभई जनताबाट अनुमोदन गराउन अनुरोध गर्दछु। सदनबाट पास गराउन हतारो नगर्न माननीयहरुलाई आग्रह गर्दछु? हेर्नुहोस् – भारतलाई जब हिन्दुस्थान र पाकिस्तान बनाइयो, त्यहीँ कारण शान्तिका दुत महान बिचारक गान्धीको हत्या भएको थियो। यो विषय नेपलमा पनि नदोहोरियोस्। यतिबेला जनात आर्कोषित बनेका छन्। र, अर्काकुरा माननीयहरुलाई आग्रह छ – तपाईको गाउँ र तपाईको समाज वरिपरि बग्ने नदि नालाहरु, वन जङ्गल र जमिनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने – यसमा गमभीर सोच गरौं?
युवाहरुलाई विदेश जानबाट कसरी रोक्ने, देशमै रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने बारेमा सोच्न आग्रह गर्दछु। एमसीसीलाई आउँदो चुनावमा घोषणा पत्रमा लेखेर जनता माझ लिएर जार्नुहोस्। जनताले तपाईलाई जिताउने छन्। जनताको मतको कदर गरियोस्। छलकपट नगरियोस? चुनावमा नोटले, भोट किन्न बन्दगरियोस् धन्यवाद।